के नेहा कक्कड गर्भवती छन् ? खोलिन् वास्तविकताको पर्दा | Rochak
September 21, 2021 NepstokLeaveaComment on के नेहा कक्कड गर्भवती छन् ? खोलिन् वास्तविकताको पर्दा
एजेन्सी । विगत धेरै दिन देखि नेहा कक्कड गर्भवती भएको भन्दै अनुमानका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । जबदेखि नेहा कक्कडले इन्डियन आइडल बाट ब्रेक लिएकी थिइन्, त्यसपछि यो खबर आयो कि नेहाले गर्भावस्था को कारण शो छोडेकी थिइन्। अब नेहा कक्कडले आफ्नो गर्भावस्था को सत्य सार्वजनिक गरेकी छन् ।
नेहा कक्कडले गर्भावस्थाको रहस्य खुलाइन्
नेहा आफ्नो नयाँ गीत कान्ता लाग को प्रचार को लागी डान्स रियलिटी शो ुडान्स दीवाने ३ु को सेट मा पुगिन्। आइतबार प्रसारण भएको महासंगम एपिसोडमा नेहा कक्कड आफ्नो भाइ टोनी कक्कड र गायक यो यो हनी सिंह संग देखिएकी थिइन्। शोमा एक प्रतियोगीको नृत्य देखेपछि नेहा यति प्रभावित भएकी थिइन् कि उनले आफ्नो पति रोहन प्रीत बाट यस्तै बच्चाको माग गरिन् ।
नेहाले भनिन् कि उनी कस्तो प्रकारको बच्चा चाहन्छिन्
यस क्रममा नेहाले खुलासा गरिन् कि उनी र रोहनप्रीतले अझै बच्चाको योजना बनाएका छैनन्। नृत्य दीवाने को प्रतियोगी गुंजन को लंग नृत्य देखे पछि, नेहाले उनको प्रशंसा गरिन् । उनले भनिन्( भगवानले आशिष दिऊन्। नेहाले भनिन् कि रोहु (रोहन प्रीत) र मैले अहिले नै बच्चा को लागी कुनै योजना बनाएका छैनौं, तर जब पनि हाम्रो बच्चा हुन्छ म यो गुञ्जन जस्तै बच्चा चाहन्छु। नेहा कक्कडको प्रशंसा सुनेपछि गुञ्जन मुस्कुराउन थालीन्। गुंजन नृत्य दीवाने ३ का सबैभन्दा प्यारी प्रतियोगी हुन् ।
नेहा-टोनी र हनी सिंह को डान्स दीवाने शो मा धेरै रमाईलो भयो। रियालिटी शो मा एक पल थियो जब नेहा कक्कड भावुक भए। माधुरी दीक्षितलाई देखेर नेहाको आँखा भिजेको थियो। नेहा रोईन् र भनिन्, आज तपाईलाई भेटे पछि, फ्यान गर्ल मोमेन्टको पलको वास्तविक अर्थ बुझें ।
यी गुण भएका नारी बनाउँछन् घरलाई स्वर्गसमान :